HTC mechiri na ọnwụ maka afọ nke asaa n'afọ. Gam akporosis
Anyị amatala ogologo oge na HTC anaghị agafe oge ya. Ọnwa kwa ọnwa, ọghọm dị na nkewa ekwentị na-abawanye. N'agbanyeghị nke a, ụlọ ọrụ ahụ ekwupụtala na ga-aga n'ihu na-ebupụta igwe na 2019. Ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ bụ mgbanwe mgbanwe na akụkụ nke ha, n'ihi na ha chọrọ ilekwasị anya na elu-ọgwụgwụ n'ime afọ ọhụrụ a nke amalitegoro.
Mana afọ 2018 abụghị afọ dị mma. Ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ nke nkeji iri na ise nke afọ na 2018 zuru ezu ekpughere. N’afọ nke asaa n’ahịrị, HTC mechiri emechi. Onu ogugu ndi n’eme ka odighi nma banyere ulo oru ha, nke dicha ka ogaghi agwu n’oge na adighi anya.
HTC mepụtara n'ọnwa Disemba 2018 a revenue nke 66,36% dị ala karịa ndị enwetara na Disemba afọ gara aga. Nke a bụ ụlọ ọrụ kasịnụ ụlọ ọrụ ahụ nwetara site n'otu afọ ruo afọ ọzọ. Ọ na-echekwa mbelata na nsonaazụ nke Nọvemba, nke bụbu nke kacha njọ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Na ngụkọta maka afọ, nsonaazụ adịghị mma. HTC ahụla otú ego ya ruru 61,78% jiri ya tụnyere 2017. Dịka anyị gwara gị, ọ ga-abụrịrị afọ nke asaa n'usoro nke a mere maka ụlọ ọrụ ahụ. Oge ikpeazụ nke enwetara uru, ọ bụ n'ọnwa June na 2017. Mana nke a na-eme kwa afọ bụ nke nfu.
Otu n'ime nsogbu ndị isi ụlọ ọrụ ahụ nwere bụ na ire ya esiwanye na nkeji iri na ise nke afọ. Ọ bụ oge mgbe ụdị na-ere ihe. Mana HTC ahụtụbeghị mgbanwe ọ bụla site na ire ya n'oge ọnwa ọkọchị. Ya mere, ha eritebeghị uru na mmụba nke ahịa na ụbọchị ndị ahụ.
Obi abụọ adịghị na ya ogologo oge ole ụlọ ọrụ ga-enwe ike ijigide ọnọdụ a. O yighị ka àgwà ọjọọ a ọ ga-agbanwe. O doro anya na ozi ọma a ka na-adịghị mma. Anyị na-ele anya ịnụ ihe gbasara atụmatụ 2019 gị n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC » HTC na-emechi afọ ọzọ na ọnwụ
Xiaomi na-arụ ọrụ na Xiaomi Mi A3
Apple wepụrụ iPhone 7 na iPhone 8 na ire ere na Germany n'ihi ikpe Qualcomm